Iindaba zeLenovo: Ukuqaliswa, iMfono, iitafile, ingcambu kunye nokunye - i-Androidsis | I-Androidsis
ILenovo ngumenzi waseTshayina okwangoku othengisa ii-smartphones kunye neetafile ezine-Android njengenkqubo yokusebenza. Inkampani iyaziwa ngokuvelisa iikhompyuter zeelaptop, phakathi kwezinye iimveliso zombane. Iimpawu ezifana ne-ZUK kunye ne-Motorola okwangoku ziyinxalenye yeqela leLenovo, ke zezona zibaluleke kakhulu kwintengiso ye-Android.
Iifowuni zeLenovo zibonakaliswe ngexabiso elikhulu lemali, into ebenza ukuba bakhethe umdla omkhulu kubathengi. Apha unokufumana iindaba zamva nje okanye uphononongo malunga neefowuni zeLenovo nge-Android njengenkqubo yokusebenza.
ILenovo Tab P11 inikwe ipaneli ye-2K, isuti yeOfisi kunye ne-Android 10
Umenzi owaziwayo uLenovo ubhengeze ithebhulethi entsha kwintengiso yaseAsia enegama leTab P11, a…
I-Lenovo Legion Ifowuni yeDuel ifikelela kwintengiso yaseYurophu nge-16 GB ye-RAM
por UAron Rivas yenzayo 2 iminyaka .
IYurophu yamkele i-smartphone entsha, eyenye ngaphandle kweLegion Phone ...
I-Lenovo Tab P11 Pro, ithebhulethi entsha enesikrini se-2K kunye ne-Snapdragon 730G
Inkampani yaseTshayina engumnini weMotorola, iLenovo, iphinde yenza igosa elitsha leethebhulethi, eliphantsi ...
I-Lenovo Legion Ifowuni yeDuel ngoku isemthethweni kwaye isebenzisa iSnapdragon 865 Plus kunye ne-144 Hz screen
ILenovo ayilulo uphawu olwaziwayo ngokunikezela ngee-smartphones zemidlalo kolu shishino. Ngapha koko, ngaphezulu ...
I-Lenovo Z5 Pro GT, iselfowuni yokuqala yehlabathi ene-Snapdragon 855, ekugqibeleni ifumana i-Android 10
I-Snapdragon 855 yayiyeyona chipset iphezulu ye-2019 eyabhengezwa ekupheleni kuka-2018.
I-Lenovo Legion iya kubandakanya i-90W yokutshaja ngokukhawuleza
por URafa Rodríguez Ballesteros yenzayo 2 iminyaka .
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo besithetha ngokuzibophelela kwenkampani yeLenovo kwimidlalo yokudlala ye-smartphone, iLeovo Legion….
I-Lenovo M10 Plus, ithebhulethi enkulu enkulu exhomekeke kwi-chipset ye-Mediatek's Helio P22T
Sivele sazi uthotho olutsha lwe-Huawei, oluqukethe i-P40 trio, kunye ...
I-Lenovo A7 siselfowuni esitsha esiceba ukungena kwinqanaba eliphantsi ngeSpreadtrum SoC
ULenovo ngumenzi waseTshayina ongazisunguli ii-smartphones rhoqo. Ke ngoko, ikhathalogu yakho ...
I-Lenovo sele isebenza kwifowuni yokudlala ye-5G phantsi kwegama leLegion
por UDaniPlay yenzayo 2 iminyaka .
U-Lenovo ufuna ukungena ngokupheleleyo kwintengiso ye-smartphone yokudlala ngokusungulwa kwemodeli entsha eyi ...
Le yithebhulethi entsha yeLenovo esungulwe ngeSpapdragon 450
I-Lenovo M10 FHD REL ligama lethebhulethi entsha yomenzi ngoku efumanekayo ...
I-Lenovo K10 ibonakala iqinisekisiwe kwaye kubonakala ngathi yinguqulelo enikwe igama ngokutsha yeMoto E6 Plus
por UAron Rivas yenzayo 3 iminyaka .
ILenovo K10 Qaphela kunye neLenovo K10 Plus uthotho lunokufumana ilungu elitsha kungekudala. Amaxwebhu okuqinisekiswa kwe ...
I-Lenovo izakwazisa iselfowuni ye-5G yokuqala nge-Snapdragon 855
I-Lenovo Tab 4 ayizukufumana i-Android 8.1 Oreo kude kube sekupheleni konyaka
ILenovo Z5 ithengisa ngemizuzu kuphehlelelo lwayo eChina
I-Lenovo A5 kunye neLenovo K5 Qaphela: Uluhlu oluphakathi lwebhrendi entsha
ILenovo Z5 isemthethweni. Yazi iimpawu zayo kunye nokubalulwa!
Ukucaciswa kunye neempawu zeLenovo K5 entsha kunye neK5 Play
I-Lenovo S5: Uluhlu oluphakathi kwinqanaba elitsha lophawu lwaseTshayina
Imifanekiso yokuqala evuzayo yeMoto E5
I-Lenovo K320t Iinkcukacha ezigcweleyo zityhiliwe
IMoto G4, uhlalutyo kunye noluvo emva kwenyanga yokusetyenziswa
I-Lenovo Yoga Tab 3 Pro, ithebhulethi enomdla ngokwenene neprojektha ye-pico
Eyona Rom ingcono kwiLenovo K3 Qaphela yi-AOSP Rom evela eXancin
Ungayihlaziya njani i-Lenovo K3 Qaphela kwi-Android 5.1 usebenzisa iRom ephekiweyo esekwe kwigosa lokwakha i-1526
Uyifaka njani i-TWRP Ukubuyisela kunye neLenovo K3 yeNqaku
Ukuphononongwa kweLenovo K3 Qaphela, yonke i-Octa Core 64-bit kunye ne-2 Gb ye-RAM yee-Euro ezingama-135 kuphela
Uluhlu olusemthethweni lweetheminali zeLenovo eziya kuhlaziywa kwi-Android Lollipop